ငွေသုံးကြရအောင်..။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Steal Deal » ငွေသုံးကြရအောင်..။
Posted by kai on Sep 4, 2010 in Steal Deal, U.S. News | 1 comment
အခုယူအက်စ် ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ စနေနေ့မနက်ပေါ့။ မနက်၁နာရီခွဲပါ။
စနေ၊တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊ ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်တာမို့ ..တချို့ လည်း ခရီးတွေထွက်ကုန်ကြပါပြီ။
ဆီဈေးက မနှစ်ကထက်စာရင် ၃ဒေါ်လာအောက်နားမှာရှိတာမို့ …ခရီးထွက်ကြတာ မနှစ်ကထက်ပိုတယ် ပြောပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယန်းစုစုပေါင်း ၂သန်းခွဲလောက်ခရီးထွက်ဖို့ရှိတယ်လို့ စစ်တမ်းကဆိုပါတယ်။ စီးပွားရေးလေးလံထိုင်းမှိုင်းတာကလည်း နည်းနည်းတော့ရုံးထွက်နေနိုင်ပြီမို့ သုံးနိုင်လာကြပြီဆိုပါတော့။
မသုံးနိုင်လည်း သုံးကြပါခင်ဗျ။ ငွေဆိုတာ သုံးပေးမှ ငွေကြေးလှည့်ပါတ်စီးစင်းတာမို့ ပါ။
သုံးတဲ့အခါမှာ ပေါချောင်ကောင်းလေးတွေ သိတာလေးတွေမျှပါတယ်။ ဖတ်ပြီး ကြည့်ကြက်လုပ်ကြပေါ့နော..။
Kenneth Cole Labor Day Sale – 40% off
“Get More Than Labor Day Off”
Get 40% off from Thursday, 9/2 to Tuesday, 9/7, at Kenneth Cole stores and online. FS on $100 or more.
Labor Day Weekend – Treasure Island, Las Vegas, NV for $243.00 Through ORBITZ
If your heading to Las Vegas last minute like me you may be interested in this deal. Orbitz.com hasadecent rate on TI (treasure Island) for September 3-5 Friday-Sunday morning for $243.00 The room isastrip view 400sqft room. They never guarantee youaroom with two beds. It depends on what they have. I booked for two people to keep cost down but they never check if you bring more. This is about $90 off the regular site price. Expedia is quoting $360 if you factor in the resort fee. FYI I calculated the total for this deal with the $20 per day resort fee included. Treasure Island isa4 star hotel and has awesome bar’s and pool area. Thought I would share this with everybody. See you in Vegas.
1-800-642-2484 to book.
Coach Factory Outlet 20% Off through 9/6/10
Coach Factory Outlet is havingaLabor Day event 20% off coupon now through 9/6/2010.
ဒါကတော့ လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်ပါ။ နေ့ရက်လေးသတိထားပေါ့နော။ လေဘာဒေးပိတ်ရက်ကတော့ လပ်စ်ဗေးဂတ်မှာ လူတွေပုံနေလောက်ပါပြီ။ ကားမောင်းလည်း သတိထားကြပေါ့။ သောက်ရင်မမူးနဲ့။ မူးရင်မမောင်နဲ့ပေါ့။
Palms in Las Vegas $29week/$49weekend
Book by Sep.30/2010 for stay through Oct31/2010
Upgarade to premium suite for $20 more.
VIP nightlife pass and complimentary spa admission.
Click their link to check for availability
နောက်ဆုံးတခုကတော့ အင်တာနက်ဈေးလျှော့တာပါ။ ကွန်ပျူတာ၊အိုင်တီပစ်စည်းတွေပေါ့။
မြန်မာပြည်က လူတွေကတော့ ယူအက်စ်ကသိတဲ့မိတ်ဆွေတွေဝယ်ခိုင်းပေါ့။ ဈေးတွက်ရင် အခွန်နဲ့ ပို့ခထည့်ပေါင်းဖို့တော့ မမေ့ကြနဲ့နော..။
ASUS Eee PC 1005HA-EU2X-BU Netbook – Intel Atom N270 1.60GHz, 1GB DDR2, 160GB HDD, 10.1″ WSVGA, Windows XP Home, 3-Cell, Blue
Gilroy Gardens admission for $12 per person – limited days
Gilroy Gardens back to school special (over 70% off)
Getafront-gate admission ticket for only $12 per person for up to6guests (ages 3+)
See coupon and details here: